NordVPN: imwe yeakanakisa maVPN munyika | Linux Vakapindwa muropa
Tu wega Paunotsvaga paInternet ikodzero, asi yakatyorerwa zvachose. Mazhinji masevhisi anotora yako data uye oishandisa kune mamwe mishambadziro yekushambadzira kana kuitengesa kune yechitatu mapato. Zvinopfuura chikonzero chakaringana chekuti iwe ufunge zvakanyanya kushandisa VPN.
Mukuwedzera, mamwe masevhisi anorambidzwa munyika yako, iyo inogumira kuwana kwako izvo zvemukati zvaunoda kana zvaunoda. Kana iwe uchiguta neyakajairika meseji «Iyi x haiwanike munyika yako"Kana"Iyi x haiwanike munyika yako«, Ipapo iri imwe yematambudziko mazhinji aunogona kugadzirisa neVPN.
Shanyira NordVPN kana iwe uchida kuve neakanakisa maVPNs pamusika
1.1 Makomborero eVPN
1.2 Iko yemahara VPN inokurudzirwa?
1.3 Sei ndichida VPN?
2 Chii chandinofanira kuchengeta mupfungwa kana ndichisarudza VPN?
3 Kurudziro yedu: NordVPN
3.1 Rejista yedata
3.2 Mutengo uye nzira yekubhadhara
3.6 DMCA inokumbira
3.7 Encryption uye chengetedzo algorithm
3.9 Basa rehunyanzvi
3.10 Zvimwe zvikonzero?
Kana iwe uchiri kusaziva kuti chii VPN (Virtual Yakavanzika Network), kana chaiyo yakavanzika network, so iwe unofanirwa kuziva iyo pfungwa zvakakwana kuti unzwisise zvese zvakanaka zvaunogona kuwana kubva mukuishandisa.
VPN ishumiro inokutendera kuti ubatanidze kunetiweki senge yeInternet nenzira yakachengeteka. Izvi zvinoitwa nekuda kweiyo obfuscation yemavambo eneti traffic. Ndokunge, iyo VPN inokupa iwe neimwe IP, iyo inogona kutobva kune imwe nyika isiri yako.
Kune rimwe divi, iyo VPN zvakare encrypt network traffic, ndiko kuti, rese data rinopinda kana rinobuda nekuda kweichi chiitiko chekubhurawuza chichavezwa. Izvi zvinovaita kuti vasanetseke kune vechitatu vanhu kukwanisa kuvasvikira uye kunyangwe kumwe kurwiswa kwemakomputa vanoshandisa vanonunira (mapaketi vaongorori) seMitM.
Sezvauri kuona, zvakanakira zvakawanda ndiani ane VPN. Uye iyo yega yekudzikira kune iyi mhando yebasa ndeyekuti inogona kudzikisira yako yekubatanidza kumhanya zvishoma. Chinhu chisiri chinetso kune yanhasi-akurumidza, epamusoro-bandwidth network. Uye zvakare, kune mamwe masevhisi eVPN akakwanisa kurerutsa zvakashata izvi uye nekukutendera kuti utarise zvakapusa pasina kurasikirwa.
Iyo VPN inokutendera iwe kuti uwedzere zvakachengeteka iyo LAN network pamusoro peveruzhinji network senge iyo Internet. Izvi zvinogadzira chiteshi kuitira kuti mudziyo unobatana utumire uye ugamuchire data sekunge yaive mukati mega network. Uye izvo zvinogoneka kuburikidza neinongedzo poindi-kune-poindi kubatana, uye nenzira yakajeka yemushandisi uye nezvakanaka senge:
Dhata kuvimbika, chengetedzo uye zvakavanzika: mamwe mazwi anovhiringidza, asi haana kunyatsofanana. VPN inogona kukubatsira iwe kuita chinongedzo chinoremekedza ese matatu mazano:
Chengetedzo: iyo VPN inopa kunyorera, saka zvinongedzo zvichave zvakachengeteka zvakanyanya kurwisa cyberattacks nevanhu vechitatu. Uye izvo zvakakosha kumba, asi zvimwe zvakawanda kumakambani anobata rwakanyanya ruzivo rwakakodzera.
Kuvanzika: inoreva kuchengetedzwa kwedata neruzivo rwunotsinhaniswa pakati peanopa uye mumwe kana vanogamuchira. Mune ino kesi, vechitatu mapato vanodzivirirwa kubva pakuiwana, izvo zvavasingafanire kuwana. Semuenzaniso, kana mumwe munhu akabata iyo data rakachinjiswa. NeVPN, kuverengerwa zvaisakwanisika. Kune rimwe divi, mukubatana kunoendesa mune yakajeka mavara, mapassword, zvakavanzika data, nezvimwe zvinogona kutorwa.
Kuvimbika: inoreva kuve nechokwadi chekuti iyo data yakatamisirwa inosvika kune iye anogamuchira nemazvo uye zvakakwana. Pasina kurasika munzira kana kushandurwa nevechitatu mapato vanovawana.
Nyore: VPN services vatengi mapurogiramu anowanzo kuve nyore kwazvo kumisikidza uye kumhanya, kunyangwe kune vasina-tekinoroji vashandisi.
Viga IP: nekukupa iwe imwe nyowani IP yakapihwa neVPN mupi, inokutendera kuti uvanze IP yako (kubva kuIP) uchitsvaga. Kwete chete iyo yakachengeteka zvakanyanya, asi inogona kukubvumidza iwe kuti uwane izvo zvinorambidzwa zvemukati munyika mako sekutaura kwandakaita.
Savings: VPN inogona kupa mushandisi kana kambani zvakanakira izvo zvinogona zvakare kuwanikwa nedzimwe nzira, asi dzinodhura.
Iko yemahara VPN inokurudzirwa?
Kune mamwe masevhisi Mahara vpn, zvese zvePC uye nharembozha. Aya masevhisi anowanzo kuve nemipimo maererano nekushanda uye kwete ese akanaka kune chero chinhu. Ivo zvakare vanoisa inorema dhata miganho, ino ganhurira huwandu hwezuva nezuva, vhiki nevhiki kana pamwedzi traffic.
Uye zvakaipisisa pane zvese, mamwe eaya emahara masevhisi unopedzisira wavabhadhara. Ndokunge, kunyangwe ivo vasingadhure mari, vanogona kuita kuti iwe urasikirwe nenguva, kusvika pakuora mwoyo nekuda kwekukanganisa, kumhanya kunonoka, kuita kwakavharika, kana kuchengetedzeka kwavo kwakashata.
Sei ndichida VPN?
Sezvaungave iwe watofungidzira, ungave uri wega uye uchida kuchengetedza imba yako kuchengeteka kana uine kambani, kuva neVPN kunogona kukuchengetedza zvakanyanya nyaya dzekuchengetedza. Iwe unogona kunyarara zvakanyanya paunenge uchitsvaga, nekuda kweiyo yakasimba yekuchengetedza algorithms iyo mamwe masevhisi eVPN anayo.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti yako ISP, kana Internet service provider (Orange, Telefónica, Vodafone, Jazztel, Eurona, ...), ichave iyo inodzosera rese traffic yeneti kuenda kwauri kuenda. Ndokunge, zvese zvinotanga kupfuura nemaseva ayo kutanga, saka inochengeta zvese zvaunoita uye inogona kutengesa yako data rekubhurawuza kumakambani ekushambadzira, vamiriri vehurumende, makambani, nezvimwe.
Pamubvunzo we geographic kurambidzwa, IP yako "inokupa iwe kure", sezvo zvichiratidza nyika yekuzvarwa, uye izvo zvichaita kuti ese masevhisi asiri kuwanikwa munyika mako arambe iwe kuwana. Semuenzaniso, mamwe mapuratifomu evhidhiyo anotenderera, nezvimwe. Saka iwe unogona kuona zvese izvo zvirimo pasina kurambidzwa, kuisa maapplication asingawanikwe kuSpain kubva kuGoogle Play kana App Store, kupinda kwakatemerwa masevhisi munharaunda yako, nezvimwe.
Uye ini ndinowedzera chimwe chikonzero, ikozvino ne denda reSARS-CoV-2, teleworking kana daro dzidzo zvazoita. Pakati pezviitiko izvi, yakawanda yakawanda data inotumirwa uye inogamuchirwa, kubva kune zvakavanzika mifananidzo, data remutero, chivakwa chepfungwa, nezvimwe. Chinhu chinodzivirirwa kubva pameso ekutsvaira eanogona cybercriminals pamwe nekunyorwa kweVPN.
Chii chandinofanira kuchengeta mupfungwa kana ndichisarudza VPN?
Paunenge uchisarudza VPN unofanirwa kufunga nezvazvo hwokugadzira hunhu maunofanira kutarisa kuita sarudzo yakanakisa:
IP- Mamwe masevhisi eVPN anongokupa iwe akasiyana IP. Vamwe vane sarudzo yekusarudza kwainobva iyo IP. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unoda kuwana sevhisi iyo inongowanikwa chete kuGerman. Iwe unogona kusarudza kuwana IP kubva munyika ino kuti ukwanise kuwana sevhisi sekuti kana uine hukama hweGerman.
Encryption algorithm: kuita uye chengetedzo zvinoenderana zvakanyanya nazvo. Iye achange achitungamira kunyorera neterevhizheni traffic, uye zvakanyanya kusimba, zvichanyanya kuoma kugona kudzikisa kufambisa. Mamwe maalgorithms ari panjodzi zvakanyanya kupfuura mamwe, asi mazhinji akanakisa eVPN masevhisi anoshandisa yemauto-giredhi kunyorera kuitira zvakanyanya kuchengetedzeka.
SpeedMahara maVPN anowanzo kuve nehurombo kumhanya, nepo achibhadharwa maVPN ane akanakisa kumhanya. Uye kumhanya uku kune chekuita nekuvharira nekuti, kana vachigona kunyorera nekuburitsa dhata nenzira inonamira, kumhanya kwacho hakukanganisike zvakanyanya.
Kuvanzika uye kusazivikanwa: Mamwe masevhisi eVPN anoda kuchengetedza yako kunyoresa data, senge yako IP kero, zita, ruzivo rwekubhadhara, nezvimwe. Izvo zvaizoita kuti irege kunyatso kuzivikanwa, uye iwe unogona kuzivikanwa. Kunyangwe ichi chiri chinhu chinoshungurudza avo vanoshandisa maVPN zvezvinhu zvisiri pamutemo kupfuura vamwe vashandisi ...
Rutsigiro rwehunyanzvi- Mahara VPN masevhisi kazhinji haana kutsigirwa kana kushandirwa zvisirizvo. Mukupesana, zvakabhadharwa maVPN anowanzo kuve nemasevhisi akanaka ekutsigira vatengi. Mazhinji emasevhisi aya ari 24/7, saka anogara aripo kwauri panomuka matambudziko. Mamwe mapuratifomu ane basa muSpanish, mamwe chete muChirungu.
Tsigiro / chikuva- Haasi ese masevhisi eVPN ane vatengi kune ese mashandiro masystem kana mapuratifomu. Icho chinhu chakakosha kuti urambe uchifunga kuti chigone kushanda pane yako OS: Windows, Linux, macOS, Android, iOS, nezvimwe.
Shamwari GUI: kana iine hushamwari graphical interface, zvichave zviri nyore kugadzirisa nekumisikidza. Mamwe maVPN ane mapenicha akareruka, uye nekabhatani akareruka vanokutendera kuti umire kana kuvatanga nyore. Zvakare, iwo marongero haana dambudziko kana.
Nzira dzokubhadhara- Yakabhadharwa VPN masevhisi anotendera nzira dzinoverengeka kubhadhara kunyoreswa. Vanogona kubva kumasevhisi akabatanidzwa muzvitoro zveapps zvemafoni nhare, makadhi echikwereti, Google Pay, uye kunyangwe mamwe ane madhijitari akadai seBitcoin, yekusazivikanwa zvakanyanya.
DMCA inokumbira- Izwi rekuti DMCA rinoreva mutemo weUnited copyright. Iyo inoranga kugadzirwa, kugoverwa, uye kumwe kutyorwa kwekopiraiti, senge kubiridzira kwemafirimu, mimhanzi, uye software. Zvichienderana nekuti VPN mupi webasa waunosarudza anoshanda kupi, zvinoshandira izvo zvikumbiro kana kwete. Kana ichivashandira, inogona kuendesa iyo data yainayo nezvako kuUnited States kuti itore matanho epamutemo pabasa rako rekunyepedzera. Ukasazvigamuchira, haufanire ...
Kurudziro yedu: NordVPN
Ini pachangu, ndakaiyedza pane akati wandei nhare yangu, uye mhedzisiro yakawanikwa ne NordVPN zvave zvichinyatsogutsa. Ndakaisarudza nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, izvo zvandinozopaza muzvikamu zvinotevera.
Hira NordVPN uye unakirwe nekuvanzika kwako
NordVPN haichengete chero rekodhi revatengi vayo (email chete uye mubhadharo), zvakare haina kurekodha yako yekubatanidza zviitiko, kunyangwe pangave nedhata inoenda kune yechitatu-bato masevhisi seGoogle Analytics, Zendesk, Crashlytics, nezvimwe. Kuwedzera kana iwe uine hanya nezve zvakavanzika zvako.
Mutengo uye nzira yekubhadhara
NordVPN haisi imwe yeVPN yemahara, sezvo iri yakakwana kwazvo, sevhisi sevhisi, uye isina zviyero. Naizvozvo, iwe unofanirwa kubhadhara kunyorera kusevhisi yavo, asi zvakachipa kwazvo. Zvakare, kana iwe ukaongorora kukosha kwemari, zvinoita zvisingaenzaniswi.
Kune rimwe divi, inogamuchira akati wandei nzira dzokubhadhara. Pakati pavo, ini ndinobhadhara neGoogle Pay, Amazon Pay, cryptocurrencies, uye makadhi echikwereti, inova nzira dzakasununguka uye dzakajairika kune vazhinji vashandisi. Uye kana iwe uchinetsekana nemutengo, chokwadi ndechekuti ndeimwe yemutengo wakachipa, uine zvinonakidza zvinopihwa uye mapikicha ekudzikisira uye nemukana wekudzorera mari yese mushure memazuva makumi matatu kana sevhisi yakapihwa isingatendise iwe ...
Togo kutsanya semhepo, inosanganisira chishandiso chinokwanisa kuona kushungurudzwa nevamwe vashandisi chinogona kukuvadza vamwe. Ino gumira kumatanho matanhatu ekubatana panguva imwe chete uye inokwidziridza muyero wehuremu hwemaseva ako kunatsiridza mashandiro anopiwa.
NordVPN iri yenyika dzinokurumidza kwazvo VPN masevhisi. Iwe hautozo cherekedza kuti iwe une anoshanda VPN pane yako kubatana. Uye izvo hazvisi chete nyaya yekugadzirisa, asi zvakare ayo anopfuura mazana mashanu nemazana mashanu emasevhisi ekukurumidza-akapararira pamusoro pedzimwe nyika makumi matanhatu pasirese, neanoshandura NordLynx protocol, uye vese vasina dhata.
NordVPN mutengi mafomu ari yakanyanya nyore kushandisa, saka haufanire kunge uine hunyanzvi hwekombuta. Ingo kurodha pasi, riise, uye zviripo pasina masisitimu kuti ugone kusimudza iyo VPN kuti upinde sevhisi.
Paunovhura iyo purogiramu yepuratifomu yako, unosarudza dziviriro server (yenyika dzakasiyana) kana kudzvanya Kurumidza Batanidza uye iwe unogona kutanga kunakidzwa nezvakanaka zveNordVPN. Kunyangwe iwe uchida kuita imwe mhando yekugadzirisa mune iyo yekumisikidza, yayo interface inonzwisisika kwazvo uye hauzove nematambudziko.
Chokwadi kana iwe uchida kuti NordVPN iwane zvirimo kubva kune epuratifomu mapuratifomu, senge Netflix, uri kushamisika kana chiri chimwe cheaya masevhisi anoonekwa uye akavharirwa nemapuratifomu aya kana kwete. Panyaya yeNordVPN, inogamuchirwa neNetflix (zvakare Hulu, Amazon Prime, nezvimwewo), saka panenge pasina dambudziko mune izvo.
Uye zvakare, ine tekinoroji inonzi SmartPlay DNS. Chinhu chinoitwa pamaseva eNordVPN kubatsira kukunda geo-zvinorambidzwa. Uye inozviita zvizere otomatiki, saka hapana chinoda kugadziridzwa.
Nezve zvikumbiro zveDMCA, ikambani iyo inoshanda muPanama, nyika isingateedzere nemhando iyi yedare redare. Ndokunge, kana data rako rikakumbirwa kubva kuUS, harizopiwi, saka iri rimwe mukana kwauri kana wakashandisa VPN yehusimbe, nezvimwe.
Mubvunzo unomuka kune vamwe vashandisi uye wakasimudza mamwe makuhwa pamambure izvo zvisiri zvechokwadi. Kuvhiringidzika ndekwekuti kambani iri kuseri kweNordVPN ndeye Tefincom & Co SA, uye dzimwe nguva kubhadhara kunoitwa kuburikidza nekambani CloudVPN.
Tefincom iri muPanama, nepo CloudVPN inonyoreswa muUnited States. Izvo zvinogona kuisa data rako munjodzi, asi chokwadi ndechekuti ivo vanongova muyananisi kuti vabhadhare uye haina kubatana neNordVPN neimwe nzira, saka data rako richaramba riri muparadhiso yePanamani.
Encryption uye chengetedzo algorithm
NordVPN inopa zvakachengeteka zvakachengetedzwa zvakachengetedzwa, zvakachengetedzwa ne AES256 algorithm. Iyo yakasimba algorithm iyo inoshandisa block encryption scheme yakagadzirwa muBelgium uye inoshandiswa seyakajairwa nehurumende yeUnited States. Unogona kushandisa mabhureki e128, 160, 192, 224 uye 256 mabithi, mune ino kesi yakachengeteka kupfuura ese ari 256-bit.
Kunze kweiyo algorithm yakasimba, inosanganisirwa nemamwe macomputer akachengeteka eVPN senge VhuraVPN, uye IKEv2 / IPSec. Zvese zvekuti iwe unokanganwa nezve chengetedzo uye uzvipe pachako kuti ushambidze pasina kunetseka.
Kupfuura izvozvo, kuchengeteka kwako inovimbiswa nekuti NordVPN inodzivirira pakurwisa kweDNS, inovanza michina yakabatana netiweki yenharaunda (LAN), unogona kushandisa Tor nemasion eOnion kuburikidza neVPN iyi, uye vanotokutendera kuti ushandise static IP kana uchiida.
Iine chishandiso CyberSec Iwe unogona zvakare kudzivirirwa kubva kune malware uye inosemesa kushambadzira paunenge uchitsvaga. Iyo inosanganisirwa uye iwe unogona kuimisa iyo nekungori nyore. Unogona kunyange kudzivirira kushambadzira mavhidhiyo kubva pamapuratifomu akadai seYouTube.
La Uraya chinja basa Iyo zvakare imwe yesarudzo dzayo dzinonakidza, ndiko kuti, switch yekuuraya kuti ugare wakachengeteka kana uchibvisa kubatana kweInternet kana iyo VPN ikamira kuve mukushandira kwechimwe chinhu. Fungidzira kuti urikubhurawuza wakadzikama, asi kuti kune chimwe chinhu iyo VPN inomira kushanda kwenguva pfupi. Dai iwe usina iyi sarudzo, iwe ungadai uri kuendesa isina kuchengetedzwa dhata iwe usingazvizive. Chinhu chinodzivirira Kill switch.
Kana uchinetseka NordVPN kuenderana, iri harisi dambudziko futi. Kuve imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anonyanya kushandiswa VPN mapuratifomu, ivo vakagadzira vatengi maapplication eanonyanya kukosha masisitimu anoshanda, akadai seWindows, macOS, Linux, Android uye iOS. Uye zvakare, iwe unotoziva kuti iwe unogona kushandisa anosvika matanhatu akabatana michina panguva imwe chete nekunyorera kumwe chete.
Iwe unogona zvakare kuchengetedza yako smart TV uye iyo router yakachengetedzwa, pamwe nekuve nezvishongedzo zvekuisa mune iyo Chrome / Chromium uye Firefox web browser.
Iwe unotoziva kuti iyo interface yeNordVPN maapplication ari nyore uye haufanire kunge uine chero matambudziko. Uye zvakare, sevhisi yakagadzikana uye kazhinji hapana matambudziko. Asi kana kusahadzika kana chero imwe mhando yekusagadzikana ikamuka, saka unofanirwa kudzikama. Unogona kuvimba nenyanzvi yavo yekukupa iwe 24/7 sevhisi kuburikidza nehupenyu chat kana email.
Kana iwe uchida zvimwe zvikonzero, uyu mumwe mugadziri zvakare ane maapplication ekuwedzera, uye yakazvimiririra yeVPN, senge NordPass semaneja wephasiwedi, uye NordLocker kuchengetedza ako emuno mafaera nekuvanyorera.
Kana zvakakugutsa Shanyira NordVPN uye tora mukana wekupa kwavanako izvozvi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » NordVPN: imwe yeakanakisa maVPN
Zvekuti ini ndinogara ndichiyera negehena ye vpn, kuti iwe uzive kuti izvo zvaunowana neyakajeka kushambadzira, ndiko kurambwa chaiko kwechigadzirwa iwe chauri kuyedza kutengesa. Nordvpn haisi imwe yeakanakisa vpn kunze uko, iriko nemutengo, kwete nebasa, ini ndaive nayo ndokukumbira kudzoserwa kwemazuva makumi matatu, saka ... ikozvino ndine expressionvpn uye handisi kuenda kusiya kuti ndiishandise, ndichikwanisa, ndichave nayo hupenyu hwangu hwese uye ndiyo imwe inodhura kwazvo, asi mutengo wayo wakakwirira unopfuura kururamiswa paunoshandisa, ndinoreva, tarisa mutsauko mukuru pakati peimwe ne imwe, sezvakagara zvichitaurwa, izvo zvakachipa zvinodhura.
Nekukupa iwe maonero angu, ndanga ndiri mushandisi weNordVPN kwenguva yakati uye ndinofara nekuti:
1- Ivo vanopa izvo zvavanokuvimbisa iwe: maseva, kunyorera, kutenderera kwakandinakira.
2- Pane imwe nguva ini ndaive nedambudziko uye technical service yakandigadzirisa pasina kundikanganisa.
3- Kill Swich chinhu chinofanirwa kuve neVPNs dzese.
3- Zviri zvakachipa kuve TOP sevhisi. Unhu hwemutengo.
Nenzira, ini ndinoshandisa zvakare password password pane yangu nhare uye inoenda kune vhudzi.
Mushure mehope, LibreOffice inogona kunonoka kana kutumidza zita tag iyo inoratidza kuti ichapa yakabhadharwa masevhisi